गरिबका लागि खोइ उपचार ? – Chitwan Post
गरिबका लागि खोइ उपचार ?
चितवन पोष्ट दैनिकमा ‘गरिबलाई उपचार गर्ने समस्या’ शीर्षकमा एउटा विदारक खबर छापियो । उक्त समाचार विपन्न चेपाङ समुदायको प्रतिनिधि घटनामात्र हो । उपचार गर्ने खर्च नहुँदा अस्पतालको मुखै नदेखी ज्यान गुमाउन बाध्य सयौँ परिवार छन् । राप्ती नगरपालिका ११ सिद्धि रन्तेसकी आठ वर्षीया ममता चेपाङ विगत दुई सातादेखि बिरामी छिन् । तीनदिन भरतपुर अस्पतालमा उपचार गरेपछि थप उपचारको लागि भरतपुर अस्पतालले चितवन मेडिकल कलेज रिफर गरिदियो । सो एक हप्ता राखेपछि चितवन मेडिकल कलेजले पनि उपचार गर्न नसक्ने भन्दै काठमाडौँ पठाइदियो । विपन्न चेपाङ बालिकाको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा १२ हजार रूपैयाँ र चितवन मेडिकल कलेजमा एक लाख रूपैयाँ परिवारले बुझाए । अस्पतालले विपन्न बिरामीको लागि बेड छुट्याउने भने पनि गरिब बालिकाको उपचारमा छूट माग्दा आफन्तले पैसा नहुनेले अस्पतालमा किन आउनेजस्ता कर्कश आवाज चितवन मेडिकल कलेजबाट सुन्नुपरेको गुनासो गरे । अस्पतालमा लागेको एक लाखबराबरको शुल्क ऋण खोजेरै तिरेका सन्तराम चेपाङको ‘हामीजस्ता गरिबलाई त असपतालले पनि हेप्दो रहेछ’ भन्ने भनाइले निजी अस्पतालको मनोमानी प्रष्ट हुन्छ ।
यसअघि राप्ती नगरपालिका १३, स्यामराङकी ठूलीमाया चेपाङको उपचारका लागि एम्बुलेन्सलाई तिर्ने पैसा नभएका कारण बिचबाटोमै ज्यान गएको थियो । एक हप्ताअघिदेखि बिरामी भएर थलिएकी उनले कात्तिक २५ गते अस्पतालको मुखै नदेखी प्राण त्यागिन् । नेपालमा विपन्न र गरिबका लागि उपचार सेवा महँगो हुँदै गएको छ । उपचार सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा भइसकेको छ । यही देशका नागरिक जसले उपचार गर्ने सामथ्र्य त परको कुरा, अस्पतालसम्म नपुग्दै मर्नुपर्ने नियति छ । स्यामराङ जस्तै अधिकांश विपन्न बस्तीहरु अहिले नगरपालिका बनेका छन् । तर, सुविधा भने साविक गाविसको जति पनि छैन । सिद्धि, स्यामराङजस्तो गाउँका विपन्नहरु नगरवासी बनेकोमा कुनै गर्व छैन । उनीहरुले नगरबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवासुविधा र राज्यबाट उपलब्ध न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बिरामीको उपचार गर्न नसकेरै मर्न विवश हुनुपर्ने नियति राज्यविहीनताको स्थिति हो । सरकारी सेवासुविधा, अस्पताल धनी वा हुनेखानेका लागि मात्रै हो ? रोग जुनसुकै मानिसलाई लाग्न सक्छ । फरक यत्ति हो राज्यको उच्च ओहोदामा रहनेहरु समयमै र अझै विदेशमा उपचार गराउन सक्छन् । विपन्न् र गरिबलाई क्यान्सर, मृगौला, मुटुजस्ता प्राणघातक रोग लागे उपचार गर्न सकिएन भनेरै चित्त बुझाउनुपर्ने नियति राज्य विहीनता नै हो । के विपन्न र गरिब परिवारमा जन्मिनु नै अपराध हो ? राज्य चलाउने ठेकेदारहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
राप्तीकी ममताजस्ती भविष्यकी कर्णधारहरु हरेक घरमा छन् । हरेक दिन विपन्नहरुले रोगसँग जुध्दाजुध्दै अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने, अस्पतालको मुखै नदेखी प्राण त्याग गरेको खबर सुन्नुपर्ने स्थिति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि सुहाउने विषय होइन । राज्यका निकायमा रहनेहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताको आहालमा पौडी खेलेर राष्ट्रदोहन गरिरहँदा कुनै जनताको छोराछोरीले गरिबीका कारण उपचार खर्च अभावले अस्पतालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नुपर्ने नियति समाजवादको कुन रुप हो ? उपचार खर्च तिर्न नसक्दा महिनौँसम्म अस्पतालमै रहनुपरेका, एम्बुलेन्स चढ्ने पैसा नहुँदा ज्यान फाल्नुपरेका, जीवनरक्षाका लागि हरेक दिन अपिल गरिएका खबरले सरकारलाई नदुख्नु दुर्भाग्य हो । सरकार तिमी जनताकै प्रतिनिधि हौ भने विपन्न र गरिबका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर । सक्दैनौ भने विशिष्टका नाममा तिनै गरिब जनताको करबाट उठाएको रकमको दुरुपयोग नगर । समावेशी राज्य भनिएको एकै देशका नागरिकका लागि विभेद हुनुु विडम्बनाको कुरा हो । राज्यले जनताको आधारभूत अधिकारबारे गम्भीर हुनुपर्छ । विपन्नताकै कारण कुनै पनि नेपाली नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्था आउनुहुन्न ।